Ukunyamekelwa kwesikhumba ebusika
I-autumn, ngaphandle kokuyeka, ihamba ngokukhawuleza ibe yingozi ebusika, oku kuthetha ukuba imihla ngemihla kwisitrato ibanzi, kwaye emagumbini umoya uya kutsha ngenxa yeendlela zokufudumala. Ukuxhasa ubuhle kunye nobubele besikhumba kuya kunceda ukunakekelwa okhethekileyo ebusika. Okokuqala, ukunyamekela ulusu ebusika kwakuvelisa, kubalulekile ukusela amavithamini - ngokuqhelekileyo i-ascorbic acid okanye i-vitamin complex. Ukunyamekela.
Kwisikhumba sezandla ebusika kugcinwa ukunyameka kunye nokunyaniseka, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe ioli ekhethekileyo yokubilisa i-massage ehlambulukileyo elukhumbeni, ukusuka kwiphakathi yesundu ukuya kwiingcebiso, ngokukhethekileyo ebusuku. Kwakulungile ukusebenzisa ioli kwiiphonkwane, eziqukethe iivithamini A kunye no-E, inondla iplati yepiki kwaye ithambisa i-cuticle. Kubalulekile ukuqinisa izipikili, ngenxa yoko kufuneka uthathe i-calcium yokugaya kalula.
Umphumo ophezulu unikezwa ngamabhafu ngesandla kunye neoli yeoli yomlilo, ukuba ulusu lumile, kukulungele ukubeka iiglavu zekotoni emva kokuhlamba.
Ebusika kuyimfuneko ukusebenzisa amaninzi amaninzi kunye nama-creams agxininisiweyo, kunokuba ehlobo. Kukho izidalwa ezikhethekileyo kunye nefuthe "lokukhusela ebusweni", zilungile, kuba zikhawuleza, zishiya kungekho kukhanya, kwaye ziyancitshisa kakhulu ulusu.
Kukho ubuso kunye namehlo abantu abaninzi banakekele ingqalelo yokuqala, kwaye nguyena kuphela ohlala ekhuselekile ngexesha lobusika obushushu, kuba lihlala livulekele kwikhephu, umoya kunye nezinye izimo zemozulu ezimbi. Ukunceda isikhumba esilukileyo somntu ukuba sijamelane nazo zonke iintlungu zobusika, okokuqala simele siphumelele ekusebenziseni zonke izimonyo ezinobisi, iintlobo ezahlukeneyo kunye neengcezu. Ukususa i-make-up ebusika, kwakhona ngekwindla ngasekupheleni kwentwasahlobo, udinga ubisi lwe-cosmetic, aluyi kuhlambulula kuphela isikhumba sezimonyo kunye nokungcola, kodwa kuyenzicoca.
Ebusika, kufuneka unakekele isikhumba sakho ekuseni nakusihlwa. Ukufikelela kwimpembelelo eninzi kukho imfihlelo encinane: kusasa, phantsi kwekrimu yosuku, sebenzisa ubusuku obuncinane. Qinisekisa ukuba unike i-cream ukwamkela, ungaphumi phambi kokuba ukhilimu uphumelele. I-khilimu kufuneka ikhethwe ngohlobo lesikhumba sakho. Ukususela ebusika ulusu lukhuni okanye luhlaza, kufuneka ukhethe ukhilimu wesikhumba esikhathazayo.
Izihlandlo ezimbini okanye ezintathu ngeveki kufuneka usebenzise imaski enomsoco. Ngokuqhelekileyo ziyafumaneka nakwezo naziphi na izithambiso, kodwa kusetyenziswe imaski ezenziwe kwizithako zemvelo zendlu, ezona zifanelekileyo zizinyosi kunye neoli yeoli, kunye nabanye, kuxhomekeke eluhlobo lolusu.
Ukulwa imibimbi ekhaya
3 iziqu zomlomo ezingapheliyo ezilungeleyo ebusika
Ngaba udla ngokufuneka uyenze i-thermo-lifting?
Indlela umfazi evezwa ngayo indoda
Iibhotshi zebhola ebhinqini labesifazane
Ikhukhi kwi-ukhilimu omuncu
Ukuzalwa ngokusebenzisana kwamahhala
Isaladi ekhethekileyo evela kwiitata ezininzi
"Ugxothwe" imvubelo inhlama
Ukuyeka ukuthanda umlingane emsebenzini
Ukupheka kubantwana ukusuka ngonyaka
Umphunga wasebandleni waseSpain uSalmorejo
Ukwenza ngokusisigxina: iingcebiso zokunakekelwa
Indlela yokuxhobisa igumbi, igumbi lokulala, ngoko kuya kuba mnandi?
Senza ubudlova, amakhethini